Is daji Guddoomiye
Shaxda Coffee dhoobada
Waa maxay noocyada kala duwan ee wax soo saarka TXJ inta badan ka qaban?
Waxaan inta badan soo saaro miiska cuntada, kursiga cuntada iyo miiska coffee. Kuwani 3 items waxaa laga dhoofiyey badan.
Dhanka kale waxaan sidoo kale siin keydka cuntada, TV-istaag, miiska Computer.
Laga bilaabo hal weel. Iyo hareeraha 3 waxyaabaha qasan kartaa hal weel. MOQ ee kursiga waa 200pcs, miiska waa 50pcs, miiska coffee waa 100pcs.
Waa maxay Heerka tayada aad?
waxyaabaha Our gudbin karaan EN-12521, imtixaanada EN12520. Oo suuqa yurub, waxaan siin EUTR.
Waa maxay horumar wax soo saarka aad?
Waxaan dhigay workshop-soo-saarka kala duwan siday u kala horreeyaan, waayo miiska & kursi, sida workshop MDF, workshop-socodka galaas hagaajiyey, workshop.etc biraha.
Sidee TXJ xakameeyo tayada?
Our waaxda QC iyo QA si adag loo xakameeyo oo tayo leh ka semi-dhammeeyayna ay alaabta ku dhameysatay. Waxay kormeeri doonaa alaab ka hor inta loading.
Waa maxay siyaasadda damaanad aad?
waxyaabaha Our qaado damaanad hal sanno ah oo daboolaya cilladaha soo saarta. warranty wuxuu khuseeyaa oo keliya isticmaalka reerka ah waxyaabaha our ah. damaanad ma dabooli Duugga caadiga ah iyo jeexa, midab sabab u tahay gaadhista iftiinka, si xun u isticmaalka, yaraanshaha ama pilling qalabka, ama ay xirtaan xadgudub.
Waa maxay celinta ama siyaasadda sarrifka aad?
Sida alaabta waa sida caadiga ah ugu yaraan hal weel si ay macaamiisha. Ka hor inta loading waaxda QC our kormeeri doonaan alaabta si loo hubiyo tayada ok. Haddii ay jiraan waxyaalo dhowra oo ay waxyeello mar dekedda caga, kooxdayada wax iibisana ka heli doontaa xal ugu fiican in la sameeyo oo aad.
Waa maxay waqtiga dhalmada aad?
Sida caadiga ah 50 maalmood si ay u sameeyaan alaabta bulk.
Waa maxay fursadaha bixinta?
T / T ama L / C waa wax caadi ah.
Waa kuwee dekedda aad bixinta badeecadaha ka?
Waxaan leenahay woqooyi iyo koonfur saldhig wax soo saarka. Sayidka badeecada ka bixinta warshad woqooyi ka soo dekedda Tianjin. Iyo alaabtoodii oo tan iyo xagga koonfureed bixinta warshad ka dekedda Shenzhen.
idin siin muunad for free?
Sample waa la heli karo iyo amarka ayaa loo baahan yahay sida ay siyaasadda shirkadda TXJ. Inkasta oo amarka lagu soo celin doonaa in aad ka dib markii si xaqiijiyay.
Imisa maalmood ayay qaadan doontaa in la sameeyo tijaabada?
Sida caadiga ah 15 maalmood.
Waa maxay cbm iyo miisaanka xirmo shay kasta?
Waxaan leenahay faahfaahinta ee kursi kasta oo ay ku jiraan miisaanka, mugga iyo tirada in 40HQ qaban karto. Fadlan la xiriir by email ama telefoon.
Waxaan ka iibsan kartaa miiska ama kursiga dhowr xabbadood?
Waxaan leenahay MOQ ee kursiga cuntada iyo tiro yar oo aan la been abuurtay. Fadlan la fahmo.
Ma ka kuraasta & loox pre-soo ururay oo?
Waxay ku xiran tahay shuruud. Sida caadiga ah macaamiisha u baahan tahay waxa buuxiyey oo hoos u reebtay, qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in u baahan tahay pre-soo ururay oo. xirmo, garaacis badbaadin doonaa meel dheeraad ah, taas oo ah in ay wax dheeraad ah la gelin karaa 40HQ oo ay tahay dhaqaale dheeraad ah. Oo waxaynu haysannaa edbinta shirka ku lifaaqan ee kartoonka.
Waa maxay tayada baakada oo dhan? in ay noqon kartaa xoog badan?
Waxaan u isticmaali 5-lakabka kartoonka jiingado heerka tayada caadiga ah. Oo weliba waxaannu ku siin karaan xirmo si mail sida aad looga baahan yahay, taas oo ka badan xoog.
Ma leedahay macradka ah?
Waxaan leenahay macradka xafiiska Shengfang iyo Dongguan halkaas oo aad ka arki kartaa miiska cuntada our, kursiga cuntada, miiska coffee.
Intee in leeg kharashka maraakiibta?
Waxay ku xiran tahay meesha dekedda caga yahay, fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad faahfaahsan.
Maxaa ku dhacaya si haddii aan dhibaato la xidhiidha ama dhibaatooyin farsamo?
In kartoonka kasta, waxaan gelin doonaa tilmaamaha shirka gudaha in ay ka caawin doonaa in aad soo shirin sheyga. Inkasta oo haddii aad weli qabto wax su'aalo ah, fadlan email noogu soo. Waxaan kaa caawin doona inaad si ay u xalliyaan.
Ma heli karaa buugga TXJ Furniture a ii soo diray?
kheyraadka ugu wanaagsan oo ugu dhameystiran ee dhammaan alaabta waa website. Waxaan u cusboonaysiiso waxyaabaha cusub on website kasta.
ADDRESS Xinzhang Horumarinta Zone, Shengfang Town, Bazhou City, Hebei, Shiinaha 065701